Ngwa ọgwụ nwere ọgụgụ isi zuru oke ga -abụ ntụpọ ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ
Nabata na Luna Chemicals! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
Isi ụlọ ọrụ/profaịlụ
Ndị isi otu
Ihe mmemme/ihe ngosi
Sistemụ akwara etiti
Ọbara mgbali elu
Ụlọ nyocha R&D
Ụlọ ọrụ ndị nwe onwe ha
Ụlọ ọrụ ndị mmekọ
Iwu & GSP
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, n'okpuru ọnọdụ ọhụrụ nke mmepe na -aga n'ihu nke ụlọ ọrụ ọgwụ na ngwa ngwa nke mgbanwe teknụzụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ na -etolite n'ike n'ike nke "ndị mmadụ na -adịghị, ndị mmadụ na -adịchaghị mma, na ndị nwere ọgụgụ isi". N'ime ha, usoro ọgụgụ isi ọkachasị nwere ike bụrụ ntụzịaka dị mkpa maka ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ ogologo oge n'ọdịnihu.
Ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ na -enwe nnukwu ọganihu na ọgụgụ isi zuru oke
Insiders kwuru na n'ọdịniihu, ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ obodo m ga -enwe ọgụgụ isi nke ọma, gụnyere ọgụgụ isi ngwaahịa, ọgụgụ isi n'ichepụta ihe, ọgụgụ isi ọrụ, ọgụgụ isi njikwa, na ọgụgụ isi ndụ. N'ezie, ọ bụ eziokwu. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ adịlarị n'okporo ụzọ nyocha na mmepe ngwaahịa nwere ọgụgụ isi.
Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-ama ụma gbanwee ihe ngwa ngwa ya site na ọkara akpaka gaa na akpaaka, site na akpaka ruo n'ịma ozi, ịkparịta ụka n'Ịntanet, na ịrị elu ruo na ọgụgụ isi, si otú a na-emepụta ngwa ọrụ ọgwụ ọgwụ China dị iche iche nwere ọgụgụ isi. Na mgbakwunye, nyocha banyere akụrụngwa nwere ọgụgụ isi dabere na mkpa ndị ahịa. Dabere na ọgụgụ isi, ọ nwere ike belata ike ọrụ na oge ọrụ, yana n'otu oge ahụ na -ewusi ịdị mma nkwakọ ngwaahịa na ihe njikwa GMP chọrọ, si otú a na -akwalite ọgwụ ọdịnala China. Ọganihu nwere ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ na akụrụngwa ọgwụ.
Enwekwara ụlọ ọrụ igwe na -emepụta ọgwụ na -atụle ndakọrịta nke akụrụngwa dị n'etiti sistemụ, ma nwee ike chepụta dabere na ike nrụpụta yana ụdị usoro onye ọrụ, ka enwere ike ịhazi ike nrụpụta nke usoro niile. aga n'ihu na nkwụsi ike nke mmepụta. Enwere ike ịchekwa data usoro, achịkọta ma bipụta ya iche site na sistemụ nchịkwa kọmputa kọmputa mbadamba, yana enwere ike ịchịkwa oke na nleba anya nke ọtụtụ ngwaọrụ na etiti, yana ọnọdụ ọrụ, ọnụ ọgụgụ data, na nyocha onwe onye nwere ike. gosipụtara na ezigbo oge, na -eme ka usoro ahụ bụrụ akpaaka kpamkpam, onye nwere ọgụgụ isi, iji hụ na nkwụsi ike nke usoro a ka mma.
Na mgbakwunye, na -aga n'ihu na -aga n'ihu nke ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na akpaaka na ụlọ ọrụ na -emepụta ngwa ọrụ ọgwụ nke mba m, ọnụ ọgụgụ akụkụ dị mkpa na ngwa akụrụngwa dị ka ndị na -ebelata ihe na -agbasawanye. A na -akọ na enwere ndị nrụpụta mbelata nke na -ejikọ uru nke ikpo okwu dị iche iche, na -ewu usoro ngwaahịa zuru oke, ma na -akwalite usoro ngwaahịa mgbe niile, na -agbaso usoro mmepe nke njikọta ụlọ ọrụ na imepụta ihe ọhụrụ, melite arụmọrụ ngwaahịa, ma nye nchekwa, nchekwa , yana nchekwa maka ụdị akụrụngwa niile. Ezi nnyefe ike na njikwa ngwa njikwa.
Ụlọ ọrụ Smart aghọwo ebe na -ekpo ọkụ na nhazi ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Ka ọ dị ugbu a, na mgbakwunye na iji teknụzụ nwere ọgụgụ isi na akụrụngwa na akụrụngwa, ụlọ ọrụ nwere ike na atụmatụ na-aga n'ihu n'ọhịa nke ngwa ọgwụ amalitela ibuga "ụlọ nrụpụta mara mma". Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ emebela ọnọdụ nwere ọgụgụ isi abụọ, ya bụ, ngwaahịa nwere ọgụgụ isi na mmepụta ngwaahịa nwere ọgụgụ isi. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na -enwe nrụpụta kwa afọ nke 100 robots ụlọ ọrụ maka ahịrị nkwakọ azụ, usoro 50 nke ụlọ nkwakọba ihe nwere ọgụgụ isi na sistemụ lọjistik, yana otu narị robots ọrụ ahụike 150, nke etinyebere na mmepụta nke ọgwụ nwere ọgụgụ isi, na -emeziwanye ọgụgụ isi na ọkwa mba ụwa nke akụrụngwa ọgwụ China.
Na mgbakwunye, na Ngosipụta Ngwaọrụ 58th Pharmaceutical Network gbara ụlọ ọrụ ụfọdụ ajụjụ ọnụ maka iwu ụlọ nrụpụta mara mma, echiche nke traceability, na atụmatụ mmepe n'ọdịnihu. Onye na -ahụ maka ihe ngosi ahụ kwukwara, sị, "Site n'echiche macro, anyị nwere olile anya na ụlọ nrụpụta smart n'ebe niile na -etinye ụkpụrụ n'otu oge, na ụlọ ọrụ mmepụta nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru usoro GMP ọgwụ siri ike. Tụkwasị na nke a, kedu ka akụrụngwa anyị si kwekọọ na nha usoro anyị chọrọ? Iji hụ na ọ nweghị nchekwa ịrụ ọrụ, ekwesịrị ịghọta ya site na digitization na ọgụgụ isi nke akụrụngwa nkwalite. ”
Tụkwasị na nke a, a na -atụ anya na ụlọ ọrụ amamịghe ụlọ mbụ nke ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ ga -anabata na njedebe nke afọ a. A na -akọ na mgbe arụchara ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga -enwe nrụpụta nke ngwa robot ọgwụ dị iche iche dị ka robots nyocha, imejupụta robots, na robots na -enweghị isi. Ụlọ ọrụ ama ama nwere ahịrị mmepụta yana akụrụngwa ọgwụ ahaziri iche. Ojiji nke robots iji mepụta robots ma wuo ụlọ ọrụ kemịkalụ ọhụrụ nwere ọgụgụ isi bụ ụdị ụlọ ọrụ ọhụrụ nke imepụta ọgụgụ isi na ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ 4.0.
N'ezie, n'afọ ndị na -adịbeghị anya, iwebata usoro amamịghe nrụpụta nwere ọgụgụ isi na usoro nkwalite metụtara ya na -ebute mmụba ọhụrụ na mmepụta na ndụ ndị mmadụ, nke a bụkwa eziokwu maka ụlọ ọrụ igwe ọgwụ. N'ọdịnihu, na mmepe sayensị na teknụzụ na -aga n'ihu, a ga -ejikọ ọgụgụ isi nke ọma na ụlọ ọrụ igwe ọgwụ iji nye aka dị ukwuu maka mmepe nke ụlọ ọrụ ọgwụ.
Oge ezipụ: Aug-04-2021
ID nke wechat: lunachem6688
Ụlọ ọrụ Luna Chemicals Co., Limited.